Ma go'aansaday in la gaarsiiyo telefoonka in mid cusub? Haddii aad door bideen in ay ka guuraan Nokia ah in phone Motorola ah, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in ay u guuraan dhammaan faylasha aad ku jirto xiriirada, music, jadwalka iyo mail aad Motorola phone cusub. Su'aasha weyn waa sida aad tan u sameeyaan iyaga oo aan dhaawac faylasha aad ama mid ka mid ah laga badiyay faylasha aad ee geedi socodka?
Aan aragno laba hab oo taas loo sameeyo iyo in aad go'aansato mid ka mid joog aad ugu fiican.
Habka Mid ka mid ah: Isticmaalka Suite Nokia OVI
Tani waa hab fudud oo lacag la'aan ah ee xogta laga telefoonka Nokia wareejiyo si aad telefoon Motorola. Si aad u bilaabaan oo aad u baahan doontaa inaad la baxdo iyo rakibi ah Suite Nokia OVI in aad telefoon Nokia. Marka aad leedahay Nokia OVI, aad diyaar u tahay in ay bilaabaan aad kala iibsiga. Raac talaabooyinkan;
Talaabada 1: Riix Suite Nokia OVI si aad u furto. Markaas guji tab Fariin u hagaagsan gudahood Suite ah. Waa in aad suuqa kala socda.
Marka aad guji tab Fariin u hagaagsan, .Wadashaqayntaas ka bilaabi doonaan. Sii dhowr daqiiqo. Marka .Wadashaqayntaas waxaa lagu sameeyaa, waa in aad suuqa kala socda.
Next aad u baahan tahay in ay xirto Suite OVI si buuxda oo aad hadda diyaar u ah inay soo dajiyo farriimo ku saabsan telefoonka Motorola.
Talaabada 2: ka dibna waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo codsi saddexaad qayb loo yaqaan Nokia2AndroidSMS. Software waxay la shaqeysaa by wareejinta fariimaha oo dhan galay file XML ah oo aad markaas gali kartaa in aad telefoon Motorola.
Talaabada 3: codsiga Nokia2AndroidSMS ayaa ku siin doona file zip farriimaha aad ah. Waxaad Macdan kartaa file zip this on your computer si. Siibka file iyo guji file Nokia2ndroidSMS.exe ah. Waa in aad suuqa kala pop-up this
Riix diinta iyo file a XML cusub la ahbaa doonaa.
Talaabada 4: Markaas raadiyo iyo rakibi SMS Back-up iyo Soo Celinta arjiga ku saabsan telefoonka Motorola. Connect aad Motorola si aad u computer oo nuqul ka file XML in aad telefoonka Motorola iyo aad u guurtay doonaa farriimo aad.
The Qasaarooyinka habkan
Habkani waxa uu doorsoomayaasha aad u tiro badan. Waxaa laga yaabaa inay kuu fiican haddii aad u ogaataan jidkii aad ku wareegsan technology haddii kale waxa ugu fiican waa laga fogaadaa, waaba intaasoo aad halis aad files si qaldan iyo sidoo kale wax badan oo ka mid ah dadaalka careysan wareejinta. Waxa kale oo ay qaadan doonaan waqti ilaa xad in ay dhex maraan dhammaan tallaabooyinka, oo aan ku xuso software aad u leeyihiin in ay soo baxdo iyo rakibi on labada telefoonada ka hor inta aadan wax ku wareejin karaa.
Habka 2: Isticmaal Wondershare MobileTrans
Wondershare MobileTrans Reebi doonaan dhib ku haya mid ka mid ah habka. Waayo, mid, software tani waxay suurtogal aad si ay u gudbiyaan xogta oo dhan ka phone Nokia in aad telefoon Motorola in hal click. Adeeggan waxa kale oo damaanad qaadaya si xor ah 100% khatar taas oo macnaheedu ma aha in aad walwalo faylasha aad helayso si ay u socdeenna qaab saxda ah.
Wondershare MobileTrans Waxaa loogu talagalay adiga, haddii aad rabto in lagu badbaadiyo wakhtiga iyo haddii aad aragtid inaad wax ka yar casriga ah ugu xeel dheer oo sidaas daraaddeed ma doonayo in aan kala soo bixi badan oo software. Waa habka ugu fudud ee aad u hesho files ka Nokia in aad Motorola rikoor waqti.
Sidee si ay u gudbiyaan files ka Nokia in Motorola isticmaalaya Wondershare MobileTrans
Soo socda waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo software this si ay u gudbiyaan faylasha aad.
Tallaabada Koowaad: Isku labada telefoonada in kombiyuutarka
Haddii loo maleeyo in aad soo bixi oo lagu rakibay aad Wondershare Mobile Trans software si aad u computer, guji Phone in Phone inuu soo galo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Markaasay aad u baahan tahay in ay ku xidhmaan telefoonka Nokia oo aad telefoonka Motorola in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB.
MobileTrans Aqoonsan doonaan labada telefoonada ka dib markii ay la soo xiran iyo waa in aad suuqa kala socda.
Fiiro gaar ah: Haddii aad qalab Nokia ku salaysan yahay Windows nidaamka, fadlan dib ilaa xiriirada si aad u hore OneDrive, ka dibna riix Soo Celinta ka kaabta on Mobiletrans si loo soo celiyo xiriirrada xoojiyaa qalabka Android.
Tallaabo 2: Ku bilow adiga oo Transfer
All of taariikhda ku saabsan telefoonka Nokia la soo daabici doonaa dhexe. Waxaa ka mid ah xiriirada, sawiro, fariimo iyo music. Dooro kuwa aad rabto in lagu wareejiyo si phone Motorola ka dibna si fudud guji "bilowdo Copy." Waa in aad suuqa kala socda.
Dhammaan xogta adiga waa in hadda la soo guuriyeen on in aad telefoon Motorola. Waxaa fudud in. No u baahan tahay software dheeraad ah oo lagu rakibay mid ka mid ah telefoonada ama 1000 tallaabooyinka aad. Waa sahlan xal laba tallaabo.
Waa kuwee Motorola qalab aad u isticmaali?
Halkan waxa ku jira 10ka telefoonada ugu isticmaalay Motorola. Waa kuwee ka mid ah ayaad isticmaashaa?
1. Motorola Moto X: phone this android ayaa processor-dhamaadka sare iyo dareenka shaashadda ka soo daydo ka hor. Qorshahaa waxa ay sidoo kale waa mid aad u customizable.
2. Motorola Moto G: kasta oo xaqiiqda ah in aad ka heli karto telefoonka tan ka yar $ 120, waxa lagu daydo outperforms qaalisan kale ee suuqa.
3. Motorola Droid Razr Maxx HD, mid waxa uu yimid iyadoo nolosha batari wanaagsanaaday marka la barbar dhigo kale Motorola casriga ah. Waxa kale oo ay leedahay camera xal sare.
4. Motorola Phantom Q: la keyboard slide-out ah, waa fiican ee makiinada mobile. Waxa kale oo ay ku faantaa keyboard fantastik ah oo processor si dhakhso
5. Motorola Moto X, tanina waxa ay leedahay Google Hadda is-dhexgalka iyo fursadaha midabka xad-dhaaf ah. Waxa kale oo la Timaadda hore jeeda camera sare xal u ogolaanaya u HD video duubo.
6. Motorola Droid Razr M: tani android casriga ah ayaa camera hore xal Sare ah in ay sidoo kale u oggolaanaysa in duubo HD iyo shaashad Touch jawaab sare.
7. Motorola Droid Razr HD, iyadoo xal daah 1280 by 720 waa Intaa waxaa dheer ah la casriyeeyay qoyska Razr ah. Waxaa kale oo u oggolaanaysa in kaydinta dibadda iyo leedahay camera xal sare.
8. Motorola Droid Turbo: phone tani waxay caan ku tahay in ay kor u nolosha batteriga iyo daaha qurux badan AMOLED.
9. Motorola Atrix HD: Ugu qiimihiisa, phone tani waa ku dhawaad ​​sida wanaagsan sida iPhone ama Samsung Galaxy. Waxay leedahay hore u jeeda camera, lacagta lagu kaydiyo dibadda iyo shaashad la taabto si buuxda ka jawaabaan.
10. Nexus 6: tanina waxa ay leedahay design qurux badan laakiin ugu muhiimsan, ay software waa mid aad u functional isticmaalaya Vanilla Android.
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia in Motorola